Vola Ar 50 000 sy kojakoja an-tokantrano no fantatra fa nangalariny. Tokony ho tamin’ny 11 ora antoandro no tonga teny Anosimahavelona ny Polisin’ny SAG sy BSI, taorian’ny vaovao azon’ny mpitandro ny filaminana, ka nanoro ny toerana nisy an-dRasta. Rehefa nanao fahirano ilay toerana ny polisy, dia tsy nanaiky ny baiko nomen’izy ireo mba hivoaka tsy mitam-piadiana io lehilahy io. Nitsambikina avy hatrany teny am-baravarankely, miaraka amin’ny basy PA, Rasta. Nitifitra ny polisy ka voa teo ambany heliny iry farany ary niteraka ny fahafatesany izany.
Rehefa nosavaina teo anatrehan’ny filoham-pokontany ny tranony dia nahitana « rice-cookers » efatra vaovao be, « lampes de poches », taratasy fifindra-monina efa voasonia, basy PA feno bala sy fahana ary boaty feno bala roa. Nahitana rongony roa fonosana ihany koa tao an-tranony.
Raha ny fantatra dia voarohirohy ho nanafika tranona Polisy teny Tanjombato sy teny Anosizato Rasta, ao anatin’ilay andian-jiolahy « Bande des 12 ».